“ဒါဖတ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ လာပို့ပါ” - Lucky9
Homepage / Knowledge / “ဒါဖတ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ လာပို့ပါ”
“ဒါဖတ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ လာပို့ပါ”
ကဲ…ဝါကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ ဒါလေးဖတ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလာပို့ပါနော်….
သိသိမသိသိ တစ်လမ်းလုံး တစ်ရပ်ကွက်လုံး လိုက်လိုက်မဖိတ်ပါနဲ့နော်.. သွားလို့မှ ကိုယ့်လည်းသူမသိ သူ့လည်းကိုယ်မသိ မျောက်အိုကြီးလို အူကြောင်ကြောင်ထိုင်နေရမယ့်ပွဲကို မလာနိုင်ပါဘူး… နေတာက မြို့စွန်မြို့ဖျား ဆောင်တာက မြို့လည်ခေါင်ဟိုတယ် ကားရှိလည်း ကိုယ့်ကားကိုယ်မောင်းသွားရမှာ ကားမရှိရင် ကားငှားသွားရမှာ လက်ဖွဲ့နဲ့ဆီဖိုးနဲ့ taxiခ နဲ့ အရမ်းခင်လို့ မိတ်ဆွေရင်းတွေမို့ မျက်နှာနာရလို့သွားတာကိစ္စမရှိပေမယ့် သာမန်မေးထူးခေါ်ပြောအဆင့်နဲ့တော့ လာလာမဖိတ်ပါနဲ့ အားနာလို့ သုံးလေးသောင်းအကုန်ခံရအောင် ဘောစိမဟုတ်ပါ..
လက်ဖွဲ့ကျတော့ယူချင်တယ် ကျွေးတာကြတော့ ပျော့ပြဲဒံပေါက် မာကြောကြက်ဆီထမင်း ရေကျဲအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနဲ့ ရေခဲမုန့်တစ်ခါလာချဖို့ လည်ပင်းရှည်အောင်စောင့်နေရတဲ့ စေတနာမပါဘဲအဖြစ်ဆောင်တဲ့ မင်္ဂဆောင်ဆိုရင်လာမဖိတ်ပါနဲ့ မက်ဆန်ဂျာကနေ ဖိတ်စာကြီးကို forward နဲ့ ရှိသမျှလူ အကုန် send နေရင်လည်း မလာပါဘူးနော် လူတောင်လာမဖိတ်နိုင်တဲ့ပွဲကို လူကိုယ်တိုင်လည်းမလာနိုင်ပါဘူး လက်ဖွဲ့ကိုလည်း ဓာတ်ပုံပဲပို့လိုက်ပါ့မယ်/
ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ သာရေးနာရေးတုန်းက မသိသလိုလို အရူးကွက်တွေနင်း လာဖော်မရ သတင်းမေးဖော်မရဘဲ သူတို့ဆောင်တော့မှ ဖုန်းနဲ့တစ်မျိုး လူကိုယ်တိုင်တစ်ဖုံ မက်ဆန်ဂျာက တစ်သွယ် သေမလို အတင်းလာလာဖိတ်တဲ့လူတွေလည်း sorry ပါနော်… ကိုယ်လည်း အရူးကွက်ပြန်နင်းပါ့မယ် ဖင်ယားပြီး မအားတဲ့ရက် ကြားရက် ရုံးချိန်ကြီးထဆောင်ရင်လည်း မလာပါဘူးနော် အလုပ်ပြုတ်ရင် လက်ဖွဲ့ရတဲ့ငွေထဲက ၃လစာလျော်ပေးမှာလား လျော်ပေးရင် လာဖို့စဉ်းစားပါ့မယ်/
“မင်္ဂလာဆောင်မလာပါက fb တွင် block မည်” လို့ တစ်ခါထဲကြိုပြီး ဖိတ်စာထဲမှာထည့်ရေးပါ။ မင်္ဂလာဆောင်မလာလို့ အကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးပြီး block သွားတာ ကြုံဖူးလို့ပါ…. စတန့်ထွင်ပြီး တောမှာပြန်ဆောင်တာတို့ ရွာမှာပြန်ဆောင်တာတို့ဆိုရင်လာမဖိတ်ပါနဲ့ တောအထိ နယ်အထိဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်ပါ ဆောင်တာကတော့ နယ်မှာ ဒါပေမယ့် လက်ဖွဲ့လိုချင်လို့လာဖိတ်တာပါလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ.. လက်ဖွဲ့ပါ့မယ်…
ရှင်းအောင်ပြောရရင် ခင်လို့ဖိတ်တာလို့ပြောချင်ရင် သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လေးလေးစားစားဖိတ်ပါ ကိုယ်တိုင်လာဖိတ်ပါ သွားသာသွားရတယ် လာနှုတ်ဆက်မယ့်သူမရှိ ဘယ်မှာထိုင်လို့ထိုင်ရမှန်းမသိ ဘာမှလည်းလာမချဘဲ ပြန်လာရရင် ပေးထားတဲ့လက်ဖွဲ့ပြန်ယူပါမယ် (သူရိုင်းလို့ ကိုယ်ရိုင်းရတယ်မှတ်ပါ) ဟုတ်ကဲ့ လူမှုရေးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုလူလိုသူလိုသက်မှတ်ပြီး လူလိုသူလို respect ထားနိုင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာသာ လူမှုရေးဝတ္တရားထားနိုင်မှာပါ ဒါပါပဲ ဝါကျွတ်လို့ဆောင်မယ်ဖိတ်မယ်ဆိုရင် ဒါအရင်ဖတ်ပြီးမှ လာဖိတ်ပါ… မဟားဒယား ခင်နေရင်လာပါ့မယ်
ကဲ…ဝါကြှတျတော့မယျဆိုတော့ ဒါလေးဖတျပွီးမှ မင်ျဂလာဆောငျဖိတျစာလာပို့ပါနျော….
သိသိမသိသိ တဈလမျးလုံး တဈရပျကှကျလုံး လိုကျလိုကျမဖိတျပါနဲ့နျော.. သှားလို့မှ ကိုယျ့လညျးသူမသိ သူ့လညျးကိုယျမသိ မြောကျအိုကွီးလို အူကွောငျကွောငျထိုငျနရေမယျ့ပှဲကို မလာနိုငျပါဘူး… နတောက မွို့စှနျမွို့ဖြား ဆောငျတာက မွို့လညျခေါငျဟိုတယျ ကားရှိလညျး ကိုယျ့ကားကိုယျမောငျးသှားရမှာ ကားမရှိရငျ ကားငှားသှားရမှာ လကျဖှဲ့နဲ့ဆီဖိုးနဲ့ taxiခ နဲ့ အရမျးခငျလို့ မိတျဆှရေငျးတှမေို့ မကျြနှာနာရလို့သှားတာကိစ်စမရှိပမေယျ့ သာမနျမေးထူးချေါပွောအဆငျ့နဲ့တော့ လာလာမဖိတျပါနဲ့ အားနာလို့ သုံးလေးသောငျးအကုနျခံရအောငျ ဘောစိမဟုတျပါ..
လကျဖှဲ့ကတြော့ယူခငျြတယျ ကြှေးတာကွတော့ ပြော့ပွဲဒံပေါကျ မာကွောကွကျဆီထမငျး ရကြေဲအုနျးနို့ခေါကျဆှဲနဲ့ ရခေဲမုနျ့တဈခါလာခဖြို့ လညျပငျးရှညျအောငျစောငျ့နရေတဲ့ စတေနာမပါဘဲအဖွဈဆောငျတဲ့ မင်ျဂဆောငျဆိုရငျလာမဖိတျပါနဲ့ မကျဆနျဂြာကနေ ဖိတျစာကွီးကို forward နဲ့ ရှိသမြှလူ အကုနျ send နရေငျလညျး မလာပါဘူးနျော လူတောငျလာမဖိတျနိုငျတဲ့ပှဲကို လူကိုယျတိုငျလညျးမလာနိုငျပါဘူး လကျဖှဲ့ကိုလညျး ဓာတျပုံပဲပို့လိုကျပါ့မယျ/
ကိုယျ့အိမျရဲ့ သာရေးနာရေးတုနျးက မသိသလိုလို အရူးကှကျတှနေငျး လာဖျောမရ သတငျးမေးဖျောမရဘဲ သူတို့ဆောငျတော့မှ ဖုနျးနဲ့တဈမြိုး လူကိုယျတိုငျတဈဖုံ မကျဆနျဂြာက တဈသှယျ သမေလို အတငျးလာလာဖိတျတဲ့လူတှလေညျး sorry ပါနျော… ကိုယျလညျး အရူးကှကျပွနျနငျးပါ့မယျ ဖငျယားပွီး မအားတဲ့ရကျ ကွားရကျ ရုံးခြိနျကွီးထဆောငျရငျလညျး မလာပါဘူးနျော အလုပျပွုတျရငျ လကျဖှဲ့ရတဲ့ငှထေဲက ၃လစာလြျောပေးမှာလား လြျောပေးရငျ လာဖို့စဉျးစားပါ့မယျ/
“မင်ျဂလာဆောငျမလာပါက fb တှငျ block မညျ” လို့ တဈခါထဲကွိုပွီး ဖိတျစာထဲမှာထညျ့ရေးပါ။ မင်ျဂလာဆောငျမလာလို့ အကွီးအကယျြစိတျဆိုးပွီး block သှားတာ ကွုံဖူးလို့ပါ…. စတနျ့ထှငျပွီး တောမှာပွနျဆောငျတာတို့ ရှာမှာပွနျဆောငျတာတို့ဆိုရငျလာမဖိတျပါနဲ့ တောအထိ နယျအထိဘယျသူမှမလိုကျနိုငျပါ ဆောငျတာကတော့ နယျမှာ ဒါပမေယျ့ လကျဖှဲ့လိုခငျြလို့လာဖိတျတာပါလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပါ.. လကျဖှဲ့ပါ့မယျ…
ရှငျးအောငျပွောရရငျ ခငျလို့ဖိတျတာလို့ပွောခငျြရငျ သူ့ဘကျကိုယျ့ဘကျလေးလေးစားစားဖိတျပါ ကိုယျတိုငျလာဖိတျပါ သှားသာသှားရတယျ လာနှုတျဆကျမယျ့သူမရှိ ဘယျမှာထိုငျလို့ထိုငျရမှနျးမသိ ဘာမှလညျးလာမခဘြဲ ပွနျလာရရငျ ပေးထားတဲ့လကျဖှဲ့ပွနျယူပါမယျ (သူရိုငျးလို့ ကိုယျရိုငျးရတယျမှတျပါ) ဟုတျကဲ့ လူမှုရေးဆိုတာ ကိုယျ့ကိုလူလိုသူလိုသကျမှတျပွီး လူလိုသူလို respect ထားနိုငျတဲ့လူတှအေပျေါမှာသာ လူမှုရေးဝတ်တရားထားနိုငျမှာပါ ဒါပါပဲ ဝါကြှတျလို့ဆောငျမယျဖိတျမယျဆိုရငျ ဒါအရငျဖတျပွီးမှ လာဖိတျပါ… မဟားဒယား ခငျနရေငျလာပါ့မယျ
Previous post ဆရာမကြီးဒေါ်သဇင်ထွန်း ပြောတဲ့ ဝင်ငွေကောင်းပြီး ချမ်းသာစေမယ့် “၅၀ တန် ရေလုံငွေထုပ်” ယတြာ လုပ်နည်း
Next post ဦးထွန်းလွင်ပြောတဲ့ မိုးတိမ်တောင်နှင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်အကြောင်း